जंगलमा नदे'खिने चिजले झापड हन्छ घर पुग्ने बितिकै मान्छे चैट हुन्छ। देउ'ता मिसाउदा यस्तो भो - Onlines Time
दुई विकल्पमा छलफल तीब्र
पूर्वनिर्धारित सचिवालय बैठक नजिकिँदै जाँदा मध्यमार्गी नेताहरुले पार्टी एकताको रक्षाका लागि ओली र प्रचण्डका सामूह दुई विकल्प अघि सारेका छन्।
पहिलो, ओलीले प्रचण्डलाई जबाफ दिएर आफ्नो तुस मात्रै पोख्ने। दोस्रो, त्यसपछि दुबैले साझा प्रस्ताव निर्माण गरी आगामी १८ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने। त्यसो नगरी प्रचण्ड र ओलीका दुबै प्रस्ताव समानन्तररुपमा अघि बढेमा पार्टी फुट्ने निश्चित छ।
नेता गजुरेलले भने, ‘एउटा पक्षले बहुमत जुटाएर अर्को पक्षलाई कारवाही गरेमा कारवाही गरेमा कारवाहीमा पर्ने पक्ष चुप लागेर बस्ने छैन। कारण पार्टी एकता टुंगिएको छैन। पूर्णरुपमा एकता नहुँदा सम्म सहमतिमै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले अल्पमत र बहुमतको अध्यास गर्ने नैतिक आधार पनि छैन। सबैलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगले अल्मत र बहुमतलाई नै मान्यता दिन्छ।’
ओली खेमाका ‘नरम’ समूहका नेताहरुले पनि हाल आएर यी दुई विकल्पबारे छलफल थालेका छन्। नेता सुवास नेम्वाङले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावको जबाफ प्रधानमन्त्री ओलीबाट आइसकेपछि साझा प्रस्ताव निर्माण हुने सम्भावना प्रवल भएको बताए।
उनले आइतबार भने, ‘पार्टी एकता जोगाउने हो भने पहिले अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुसबैभन्दा उत्तम उपाय हो। त्यसो नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको जबाफ दिनुपरिहाल्यो। त्यसपछि दुबै अध्यक्षबाट साझा प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक छ। त्यो नै पार्टी फुटबाट जोगाउने हतियार बन्ने छ।’
उनले दुबै पक्षबाट लचकता प्रर्दशन गरेको खण्डमा मात्रै पार्टी जोगिने बताए।
तर ओली खेमामै अर्को एउटा यस्तो समूह छ जसले प्रचण्डले लगाएको आरोपको हिसाबकिताब माग्ने र आरोप सत्य नठहरिए उनले अध्यक्ष पद छोड्नु पर्ने विकल्प देखाइरहेको छ।
ओलीले प्रचण्डविरुद्ध पेश गर्ने प्रस्ताव निर्माणमा व्यस्त रहेका नेता ईश्वर पोखरेलले भने, ‘एकताको अधार भत्काएर सम्मानित व्यक्तिको जीवनमै दाग लाग्नेगरी कसैले आरोप लगाउँछ भने त्यसको हिसाबकिताब माग्ने कि नमाग्ने? हिसाबकिताब मिलेन भने के हुन्छ?’
पार्टीको उच्च तहमा पार्टी कसरी जोगाउने भन्नेमा छलफल तीब्र बनिरहेका बेला ओलीले भने प्रचण्ड समूहलाई तर्साउने क्रमलाई जारी राखेका छन्।
राष्ट्रपति, चिनियाँ राजदूत, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति, प्रधानन्याधीशलगायतसँग भेटेर ओलीले आफूविरुद्ध कदम चालिए आफू पनि चुप नबस्ने सन्देशलाई निरन्तरता दिएका छन्।
ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई शनिबार साझा सरकारका लागि प्रस्ताव गरेको देउबा निकट एक काँग्रेस नेताले दाबी गरेका छन्।
तर काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने पाँच वर्ष सत्तामा जान काँग्रेसलाई छुट नभएको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले वैधानिकरुपमा पार्टी नफुट्ने बताए।
उनले आइतबार भने,‘पार्टी जोगाउन हामी सबै लागेका छौँ। वैधानिकरुपमा पार्टी फुट्ने छैन। गैरवैधानिकरुपमा पार्टी फुटाउने शक्ति प्रधानमन्त्रीसँग होला। तर त्यसो हुने छैन।’
Prevकसरी आयो होला ४ वर्षकी बालिका माथि यस्तो कु’क’र्म गर्ने सोँच ? कल्पना पनि गर्न नसकिने घटना देख्नुपर्दा मन नै सिरिंग हुन्छ (भिडियो हेर्नुस्)
NextPrank गरेपछि रिसले आगो भए पुण्य ।। नक्कली पिडित बन्दै पुण्यबाट १० हजार लिएपछि (भिडियो हेर्नुहोस्)